Tamarta kuleyliyaha qorraxda: sifooyinka, codsiyada iyo muhiimadda | Dib-u-cusboonaysiinta Cagaaran
La tamarta korantada ee kuleylka o Kulaylka cadceedu waa tignoolajiyada isticmaasha kulaylka qoraxda si ay koronto u dhaliso. Habkani waxa uu ka dhacaa waxa loo yaqaan wershadaha tamarta kulaylka cadceedda, ama tamarta tamarta qoraxda, kuwaas oo bilaabay in laga dhiso Yurub iyo Japan horraantii 80. Faa'iidada tamartan ayaa ah in ay nadiif tahay, badan tahay oo dib loo cusbooneysiin karo. : Tobankii maalmoodba, dhulku wuxuu qorraxda ka helaa tamar la mid ah tan dhammaan kaydadka la yaqaan ee saliidda, gaaska iyo dhuxusha. Waqtigan xaadirka ah, dhowr nooc oo ka mid ah dhirta tamarta qoraxda ayaa wada nool. Spain waxay ku jirtaa booska faa'iido leh ee goobtan, maadaama ay leedahay dhowr warshadood oo kuleyl ah oo qoraxda ah iyo qayb warshadeed oo xooggan, ka qaybqaadashada mashaariicda adduunka oo dhan.
Maqaalkan waxaan kuugu sheegi doonaa sifooyinka iyo muhiimada tamarta tamarta qoraxda.
1 Waa maxay tamarta tamarta qoraxda
2 Noocyada dhirta
2.1 Warshada munaaradda kulaylka qorraxda
2.2 Saxanka Parabolic ama saxan walaaqaya warshad kulaylka qoraxda
2.3 Wershada tamarta kulaylka qorraxda ee Parabolic
3 Horumarinta tamarta tamarta qoraxda
4 Tamarta tamarta qoraxda ee Thermoelectric ee Spain
Waa maxay tamarta tamarta qoraxda
Warshada tamarta kulaylka qoraxda waxay u shaqeysaa sida warshad kulaylka, laakiin halkii ay ka ahaan lahayd dhuxusha ama gaaska dabiiciga ah, waxay isticmaashaa tamarta qorraxda. Falaadhida qorraxdu waxay ku urursan yihiin muraayadaha soo-dhowaynta, iyagoo gaadha heer kul ilaa 1.000 ºC. Kuleylkan waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo dareeraha iyo soo saarista uumiga, kaas oo kaxeeya marawaxadaha oo dhaliya koronto. Iyadoo dhirta ugu horeysa ay shaqeyn karaan oo kaliya saacadaha shucaaca qorraxda, maanta kulaylka waa la keydin karaa si loo soo saaro habeenkii.
Hadda waxa jira saddex nooc oo waaweyn oo ah dhirta kulaylka qoraxda. Soo saarista korontadu waa la mid, farqiga u dhexeeya waa sida tamarta qorraxda u urursan tahay.
Warshada munaaradda kulaylka qorraxda
Waxa ay isticmaashaa muraayado la dhaqaajin karo, oo loo yaqaan heliostats, si ay diiradda u saarto fallaadhaha qorraxda ee soo-heleyaasha ku yaal munaaradda. Muddada dhexdhexaadka ah, waa tignoolajiyada la xaqiijiyay, waxtar leh oo faa'iido leh. Dhismihii ugu horreeyay ee tijaabada noocan ah waxaa laga dhisay Almería (Spain) iyo Nio (Japan) 1981. Caqabadda hadda taagan waa in la dhimo kharashka dhismaha taawarrada tamarta tamarta qoraxda.
Saxanka Parabolic ama saxan walaaqaya warshad kulaylka qoraxda
Warshadan tamarta kulaylka qoraxda waxay isticmaashaa muraayad saxan u qaabaysan si ay fallaaraha qorraxda diiradda u saarto mishiinka Stirling ee barta xudunta u ah parabola, sidaas darteed waxaa sidoo kale loo yaqaannaa saxanka dhexe ee Stirling. Kulaylka la ururiyey ayaa kor u qaadaya heerkulka hawada, kaas oo u kaxeeya mishiinka Stirling iyo marawaxadaha si ay u dhaliyaan koronto. Geedka saxan-raaca ah ee ugu caansan waa midda ku taal Mojave (Mareykanka).
Wershada tamarta kulaylka qorraxda ee Parabolic
Noocyada noocaan ah ayaa ah kuwa ugu rajo weyn marka laga eego dhinaca ganacsiga. Waxay isticmaaleen muraayad u samaysan qaab dhululubo ah oo leh kanaal dhidibkiisa ku yaal kaasoo xoogga saaray fallaadhaha qorraxda. Tuubbadu waxay ka kooban tahay dareere kulul oo soo saara uumiga wadda marawaxadaha. Dhirta kulaylka qorraxda ee Parabolic waxay ka shaqeysaa Spain iyo waddamo kale.
Horumarinta tamarta tamarta qoraxda
Aasaaska tamarta kulaylka qorraxda waxaa lagu qeexay Augustin Mouchot 1878-kii, 1980-naadkiina waayo-aragnimada qaar ayaa muujisay awooddeeda. Ilaa dhawaan, si kastaba ha ahaatee, tamarta kulaylka cadceedda waxaa caqabad ku ahaa saddex arrimood:
Qiimaha sare ee alaabta waxay bilowday inay hoos u dhacdo maadaama tignoolajiyada horumartay waxsoosaarkuna uu kordhay.
Suurtagal ma aha in la kaydiyo tamarta si loo soo saaro hal habeen. Xaddidaaddan ayaa dhawaan uun bilowday in laga gudbo tignoolajiyada ilaaliya kulaylka. Tusaale ahaan, warshadda Gemasolar ee Seville waxay isticmaashaa cusbo dhalaalay si ay u kaydiso kulaylka, waana sababta ay u noqotay warshadii ugu horaysay ee tamarta qoraxda ee awooda in ay bixiso 24 saac maalintii.
Xaddi badan oo shucaaca cadceedda ayaa loo baahan yahay sanadka oo dhan, kaas oo xaddidaya soo gelinta tamartan gobollada koonfureed. Si kastaba ha noqotee, mashaariicda hamiga ah sida Desertec waxay soo jeedinayaan in warshado laga sameeyo gobollada sida saxaraha Sahara ka dibna loo diro koronto Yurub.
Mashaariic badan oo tamarta kulaylka qoraxda ah ayaa hadda laga sameeyay waddamo ay ka mid yihiin Aljeeriya, Marooko, Mareykanka ama Australia. Qaar badan ayaa ku lug lahaa Isbaanishka.
Tamarta tamarta qoraxda ee Thermoelectric ee Spain
Isbaanishka waa awooda aduunka ee tamarta kulaylka qoraxda. Xaalada dalka ayaa ah mid ku haboon in lagu rakibo warshado kulaylka cadceedda,sababo la xidhiidha saacadaha badan ee qoraxda iyo dhulka saxaraha ah ee balaadhan. Dhirta tijaabada ee ugu horeysay, oo la yiraahdo SSPS/CRS iyo CESA 1, ayaa laga dhisay Tabenas (Almería) 1981 iyo 1983, siday u kala horreeyaan.
Sannadkii 2007dii, ganacsigii ugu horreeyay ee PS10 munaaradda kuleyliyaha qoraxda ee adduunka waxaa loo wakiishay Sanlúcar la Mayor (Seville). Sannadkii 2011, 21 warshadood oo leh 852,4 MW ayaa shaqaynayey iyo 40 kale oo mashruuc ah, sida laga soo xigtay Protermosolar, Ururka Isbaanishka ee warshadaha kulaylka qorraxda. Marka dhammaan dhirtan cusub ay soo baxaan, qiyaastii 2014, Spain waxay noqon doontaa soo saaraha ugu horreeya adduunka ee 100% tamarta nadiifka ah iyo tamarta la cusboonaysiin karo.
Codsiyada: Biyaha kulul ee nadaafadda, kululaynta, qaboojiyaha iyo kuleylka barkadda dabaasha. Guryaha hal qoys waxay dabooli karaan ilaa 70% isticmaalka biyaha kulul.
Howlgalka: Taarikada kulaylka ayaa mas'uul ka ah ururinta shucaaca qorraxda iyo u wareejinta kulaylka dareeraha ku wareegaya iyaga.
Xeerarka iyo gargaarka: Xeerka Dhismaha Farsamada (CTE) ee la ansixiyay 2006 wuxuu u baahan yahay in lagu rakibo baalal cadceedda dhammaan dhismayaasha cusub. Kaalmada gobolka iyo territoriga waxay dabooli kartaa saddex-meelood meel ilaa kala badh kharashka rakibidda.
Qiimaha iyo kaydka: Celceliska qiimaha rakibidda 2 mitir oo laba jibbaaran waa qiyaastii 1.500 euro oo biyo kulul ah. Marka la barbardhigo gaaska dabiiciga ah ama kuleyliyaha propane, kaydinta tamarta waa € 150 / sannadkii, iyo haddii shidaalka fosil iyo korontadu sii wadaan inay koraan, kaydinta tamarta ayaa ka sii weynaan doonta. Kabitaan la'aan, muddada dib-u-celinta waxay ku saabsan tahay 10 sano, oo leh kaalmooyin, waxay qaadataa 5 sano oo keliya.
Tamarta kuleyliyaha qoraxda sidoo kale waxay leedahay codsiyo guriga dhexdiisa ah. Aan aragno waxay yihiin:
Aplicación: Soo saarista tamarta korantada ee isticmaalka guriga ama dib u iibinta shabakada guud.
Howlgalka: Qaybaha sawir-qaadista waxay u beddelaan shucaaca qorraxda koronto.
Xeerarka iyo kaalmada: Shirkadaha korontada waxaa si sharci ah looga baahan yahay inay iibsadaan koronto-ku-daran koronto, iyagoo siinaya qiimo dhimis soo-saarayaasha (hadda 575% qiimaha kiilowatt). Dhanka kale, xeerarka dhismaha farsamada waxay u baahan yihiin in lagu rakibo muraayadaha sawir-qaadista ee dhismo kasta oo dadweyne ama mid gaar ah oo ka badan 3.000 mitir oo laba jibbaaran.
Qiimaha iyo kaydka: Wax-is-gaarsiinta, qiimaha halbeeg yar oo 5 kW ah waa ku dhawaad ​​35.000 oo Yuuro. Marka la eego in isticmaalka tamarta sannadlaha ah ee celceliska guriga uu ku dhow yahay 725 euro, maalgelinta lama dhimin ilaa 48 sano ka dib.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan ka baran karto tamarta tamarta qoraxda iyo sifadeeda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Tamarta dib loo cusboonaysiin karo » Tamarta kuleylka ee kuleylka ah » Tamarta qoraxda
"Marka la eego in isticmaalka tamarta sanadlaha ah ee celceliska guriga uu ku dhow yahay 725 euro, maalgashigu ma bixiyo naftiisa ilaa 48 sano ka dib." Hadalkan aad ka soo saartay hagaajinta qalabka 5Kw ayaa aniga iila muuqda mid khaldan. Mahadsanid
U jawaab Carlos Sintora Cuè
Waa maxay ekotourism
waa maxay megawatt